1 Beresosɛm 29 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Beresosɛm 29:1-30
29 Ɛnna Ɔhene Dawid ka kyerɛɛ bagua+ no nyinaa sɛ: “Me ba Solomon a Onyankopɔn apaw+ no no yɛ abofra,+ na ɔyɛ mmerɛw, nanso adwuma no sõ, efisɛ abankɛse no nyɛ onipa dea,+ na mmom Yehowa Nyankopɔn dea. 2 Nea m’ahoɔden+ betumi biara, maboaboa ano asie+ ama me Nyankopɔn fie no; sika+ a wɔde bɛyɛ sika nnwuma, dwetɛ a wɔde bɛyɛ dwetɛ nnwuma, kɔbere a wɔde bɛyɛ kɔbere nnwuma, nnade+ a wɔde bɛyɛ nnade nnwuma, nnua+ a wɔde bɛyɛ nnua nnwuma; soham+ abo, nhyehyem abo, abo fɛfɛ a wɔde di adwini, aboɔden abo nyinaa, ne alabasta abo pii pa. 3 Me Nyankopɔn fie a m’ani gye ho+ nti, m’agyapade a ɛsom bo ma me,+ sika ne dwetɛ nyinaa, mede ɛno nso pae so ma me Nyankopɔn fie, mede ka biribiara a maboaboa ano asie ama ofie kronkron+ no ho: 4 Ofir+ sika, dwetikɛse mpem abiɛsa, ne dwetɛ a wɔapa mu dwetikɛse mpem ason a wɔde bedura adan no afasu ho; 5 sika a wɔde bɛyɛ sika nnwuma, dwetɛ a wɔde bɛyɛ dwetɛ nnwuma, ne nea adwumfo de bɛyɛ wɔn nsa ano adwuma nyinaa. Afei, hena na wayi ne yam sɛ ɔde biribi bɛhyɛ ne nsam ama Yehowa?”+ 6 Ɛnna agyanom+ abusuafie mpanyimfo+ ne Israel mmusuakuw mpanyimfo+ ne apem apem+ ne ɔha ha+ so ahwɛfo ne mpanyimfo a wɔhwɛ ɔhene nnwuma+ so no yii wɔn yam de biribi bae. 7 Enti nea wɔde bɛboaa nokware Nyankopɔn fie som adwuma ni: sika no yɛ dwetikɛse mpem anum ne darik mpem du, dwetɛ no yɛ dwetikɛse mpem du, kɔbere dwetikɛse mpem dunwɔtwe ne dade dwetikɛse mpem ɔha.+ 8 Na aboɔden abo a obiara wɔ no, ɔde bɛkaa Yehowa fie akorade no ho, na wɔde hyɛɛ Gersonni+ Yehiel+ nsa. 9 Ɛbaa saa no, ɔman no dii ahurusi sɛ wofi wɔn pɛ mu de biribi aba, efisɛ koma nyinaa mu na wofi yii ntoboa maa Yehowa;+ na Ɔhene Dawid nso de anigye kɛse dii ahurusi.+ 10 Ɛnna Dawid hyiraa+ Yehowa wɔ bagua+ no nyinaa anim, na Dawid kae sɛ: “O Yehowa, yɛn agya Israel+ Nyankopɔn, nhyira nka wo+ daa daa. 11 O Yehowa, wo na kɛseyɛ+ ne tumi+ ne hyerɛn+ ne anuonyam+ ne nidi+ wɔ wo; na nea ɛwɔ ɔsoro ne asase so nyinaa yɛ wo dea.+ O Yehowa, wo na ahenni+ wɔ wo, na wo nso na wokorɔn sen ade nyinaa.+ 12 Wo nkyɛn na ahonya+ ne anuonyam+ fi, na wo na wudi ade nyinaa so;+ tumi+ ne kɛseyɛ+ wɔ wo nsam, na onipa biara kɛseyɛ+ ne n’ahoɔden wɔ wo nsam.+ 13 Afei yɛn Nyankopɔn, yɛda wo ase,+ na yeyi w’anuonyam+ din no ayɛ.+ 14 “Anka hena ne me,+ na hena ne me man, na yɛanya ahoɔden afi yɛn pɛ mu ayi ntoboa sɛɛ?+ Wo na ade nyinaa wɔ wo,+ na wo ara wo nsam na efi na yɛasan de ama wo. 15 Yɛn de, yɛyɛ ahɔho ne atubrafo+ w’anim te sɛ yɛn agyanom nyinaa. Yɛn nna wɔ asase so te sɛ sunsuma,+ na anidaso nnim. 16 O Yehowa, yɛn Nyankopɔn, nneɛma bebree a yɛaboa ano de rebesi ofie ama wo din kronkron yi nyinaa, wo nsam na efi, na ne nyinaa wɔ wo.+ 17 O me Nyankopɔn, minim sɛ wohwehwɛ komam,+ na teeyɛ na ɛsɔ w’ani.+ Me de, komam teeyɛ mu na mayi me yam de nneɛma yi nyinaa ama, na wo man a wɔwɔ ha yi nso, wɔayi wɔn yam de nneɛma aboa ma m’ani agye. 18 O Yehowa, yɛn agyanom+ Abraham, Isak ne Israel Nyankopɔn, ma eyi nyɛ wo man komam nsusuwii+ daa daa, na kyerɛ wɔn koma kwan bra wo nkyɛn.+ 19 Na me ba Solomon nso, ma no koma a edi mũ,+ na onni wo mmara nsɛm,+ w’adansesɛm+ ne w’ahyɛde+ so, na ɔnyɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ nyinaa, na onsi abankɛse+ a maboaboa ho nneɛma ano asie no.”+ 20 Ɛnna Dawid ka kyerɛɛ bagua+ no nyinaa sɛ: “Munhyira+ Yehowa mo Nyankopɔn.” Na bagua no nyinaa bɔɔ wɔn mu ase+ de wɔn anim butubutuw fam+ wɔ Yehowa ne ɔhene anim, na wohyiraa Yehowa, wɔn agyanom Nyankopɔn no. 21 Na ade kyee no, wɔtoaa so de nneɛma bɔɔ afɔre+ maa Yehowa, na wɔbɔɔ ɔhyew afɔre+ maa Yehowa; wɔde anantwinini nkumaa apem, adwennini apem, adwennini nkumaa apem ne ɛho afɔrebɔ nsã,+ wɔbobɔɔ afɔre pii maa Israel nyinaa.+ 22 Na saa da no, wɔde anigye kɛse+ didii, na wɔnomee Yehowa anim; wɔsan sii Dawid ba Solomon hene,+ na wɔsraa no sɛ ɔkannifo+ maa Yehowa, na Sadok+ nso, wɔhyɛɛ no sɔfo. 23 Ɛnna Solomon dii ne papa Dawid ade, na ɔtenaa Yehowa ahengua+ so dii hene; esii no yiye,+ na Israelfo nyinaa yɛɛ osetie maa no. 24 Na mpanyimfo+ ne nnɔmmarima+ no ne Ɔhene Dawid mma+ no nyinaa nso brɛɛ wɔn ho ase maa Ɔhene Solomon. 25 Yehowa maa Solomon yɛɛ kɛse paa+ wɔ Israel nyinaa ani so, na ɔma onyaa anuonyam n’ahenni mu, na ahene a wodii n’anim bae mu biara annya bi saa wɔ Israel.+ 26 Yese ba Dawid dii Israel nyinaa so hene;+ 27 nna a ɔde dii Israel so hene no si mfe aduanan.+ Ɔtenaa Hebron dii ade mfe ason,+ na ɔtenaa Yerusalem nso dii ade mfe aduasa abiɛsa.+ 28 Na owui a na wabɔ akora,+ na wadi nna amee, na onyaa ahonyade+ ne anuonyam+ pii; ne ba Solomon bedii n’ade.+ 29 Ɔhene Dawid ho nsɛm nyinaa, ne mfiase kosi n’awiei, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ ɔdehwɛfo+ Samuel ne odiyifo Natan+ ne ɔdehufo Gad+ nsɛm no mu; 30 ɛne n’ahenni ho nsɛm nyinaa ne ne kɛseyɛ ne nsɛm a esisii ne bere+ so ne nea esisii Israel ne nsase+ no so ahenni nyinaa mu.
1 Beresosɛm 29